Waa ayo geesiyaashan da'da yar? Maxayse u dagaalamayaan? - Cuntooyinka giraangiraha
Waa kuwama dhallinyarrada halyeeyada ahi? Oo maxay u dagaalamayaan?
La dagaalanka gaajada waayeelka ma aha dhibaato si fudud lagu xallin karo ama si fudud loo qaadan karo. Taasi waa sababta aan ugu faraxsanahay inaan helno laba dhalinyaro ah oo superhero ah kiiska deyrtan.
Aidan iyo Nina waa kabtanada Cuntada metro ee Gawaarida Gawaarida Gaajada Gawaarida kooxda Socodka Dhammaadka Gaajada. Iyadoo ay weheliyaan hooyadooda, Tara, waxay sameynayaan wixii karaankooda ah si ay uga caawiyaan inay lacag u ururiyaan Cuntada Lugaha Gawaarida ee Soco si Aad u Dhamayso Gaajada, dadaal guud ahaan bulshada oo ay hogaaminayaan ururada gaajada ee gobolka oo dhan. Socodka Dhammaadka Gaajada wuxuu ka dhacaa subax kasta Thanksgiving Mall of America.
Waan ku faraxsanahay inaan Aidan iyo Nina gacanta ku hayno si aan u caawinno, maadaama ay tani tahay markii ugu horreysay ee Cuntooyinka Lugaha Lugta ay ka qaybgalaan Walk to End Hunger. Aidan wuxuu horeyba u caawiyay inuu u keeno dhoola cadeyn iyo cunno nafaqo leh Meals on Wheels qaatayaal ahaan mutadawiciin gaarsiinta cuntada Nina waxay rajeyneysaa inay dhowaan raacdo raadkiisa. Labaduba waxay rajeynayaan inay lacag uruursadaan si ay u taageeraan adeegan muhiimka ah, iyo sidoo kale inay ka ciyaaraan qeybta gaajada superhero ee Thanksgiving.
“Cunnooyinka Wheels waa muhiim maxaa yeelay dadka qaar ma haystaan cunto,” ayay tiri Aidan. Wuxuu rajeynayaa in isaga iyo walaashiis ay gacan ka geysan karaan hubinta in qof kasta oo u baahan cunto caafimaad leh iyo booqashooyin saaxiibtinimo leh oo ku saabsan Cunnooyinka Lugaha Laydhka ay heli karaan.
In kasta oo Aidan iyo Nina loo tixgelin karo halyeeyo, haddana kuma guuleysan karaan dagaalka ka dhanka ah gaajada waayeelka keligood. Waxay ubaahan yihiin caawinta superhero kale sidaada oo kale! Halkan waxaa ah laba dariiqo oo aad ku caawin karto iyaga.
Ku Soco Socodka Si Aad U Dhamayso Gaajada. Ku soo biir Cuntada metro ee Gawaarida Gawaarida Gaajada Gawaarida ama mid ka mid ah kooxaha waa weyn ku socda magaca xaafaddayada Cunnooyinka goobaha Wheels. Xitaa waad sameysan kartaa koox kuu gaar ah hadaad rabto.
Ku deeqo Aidan iyo Nina ama ku socod kasta oo aad dooratay ku socda magaca Cuntada Lugaha.
Aidan iyo Nina waxay rajaynayaan inaad ka caawin karto Cuntooyinka Lugaha la dhigto ugu yaraan $15,000 Thanksgiving-kan si ay u taageeraan bixinta in ka badan 1 milyan oo cunto ah oo ku yaal magaalooyinka Mataanaha ah sannad kasta. Miyaad noqon doontaa superhero gaajo ah oo aad ku biiri doontaa iyaga oo dib u siiya intaadan mahadcelin sanadkan
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Gaajada Walk to End waxaa laga heli karaa Walktoendhunger.org. Haddii aad rabto inaad nagu soo biirto Walk to End Gaajo laakiin aad qabtid su'aalo, naga soo wac 612.623.3363.
Oktoobar 20, 2014